Kacha mma nrụgide dị elu PU epoxy Injection pump machine machine Polyurethane ụfụfụ na-ejuputa onye nrụpụta na ụlọ ọrụ | Boyu
Professional High Pressure Girma A15 Ogwu Packe ...
High Pressure grouting Pu epoxy Ọgwụ mgbapụta igwe igwe Polyurethane ụfụfụ ndochi
High Pressure Ọgwụ Grouting Packer
Nnukwu Packer Ọgwụ Grouting Packer, mee site na Aluminom, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na nrụgide mmanya 10 MPa / 1465 psi / 100, dị mfe iji, dị mfe ịgbanye, nwere ike iji na obere okpomọkụ; otu akụrụngwa grouting, mfe ewu, mfe ọcha. Sealing gị n'ụlọnga nwere ike ịbụ isi mmiri polyurethane, mmanụ isi polyurethane na epoxy resin. Anyị nwere anọ nkịtị nha, 10 * 80mm, 13 * 85mm, 13 * 100mm, 13 * 150mm. Niile ndị ọzọ nha dị. Longer packer karịrị 15cm bụ maka rụrụ Ọdịdị; Short Packer 8.5cm ma ọ bụ 10cm bụ maka ok owuwu.
Dị ka akụkụ dị mkpa nke igwe na-egwu mmiri, a na-ejikarị ya eme ihe na-egbochi mmiri nke ụlọ mma ụlọ, karịsịa iji ọgwụ nke polyurethane foaming ma ọ bụ epoxy resin n'ime ihe mgbawa na teknụzụ nke nrụgide kemịkal na nrụgide.
1. Waterproofing nke ihe cracks na ụzọ ụgbọ oloko, ọwara, culvert na nsị ọgwụgwọ ọdọ mmiri.
2. Waterproofing nke ihe cracks na okpuru ulo, ala na-arụzi ụgbọala na n'okpuruala Itie.
3. Waterproofing nke site-mgbidi anwụrụ na mgbidi nkuku.
4. Waterproofing nke bughi cracks na ihe owuwu, doo, kọlụm na plank.
Hydrophilic Polyurethane (WPU) na Hydrophobic Polyurethane (OPU) ụfụfụ na-akwụsị leakage gị n'ụlọnga, Epoxy Resin.
Ihe edeturu mgbe Grouting
1. Kwụsị inye nri ma ọ bụrụ na polyurethane anaghị esi na mgbawa apụta mgbe nkeji 5 gachara. Ma nwaa ọzọ ma emechaa. Ọ bụrụ na ọ bụghị ma jupụta, kwesịrị ịlele ma lie pipeline cross-gbapuru ma ọ bụ n'ala nwere oghere na na.
2. Infusion kwesịrị anya nlele nlele nke ọrụ perfusion igwe, ma ọ bụrụ na karịa nke gosiri nsogbu (45Mpa n'elu), ga-emechi, ma ọ bụrụ na nrụgide nọgidere elu, cracks kwesịrị ịlele ma mkpọpu ala obe na cracks.
Gbọ njem / Mbukota
Mbukota Size: 1500pcs / Carton ma ọ bụ 1000pcs / Carton
Ationgbọ njem site na ikuku: Na-abata n'ime ụbọchị 2-7 mgbe nnata nke ịkwụ ụgwọ, ewepu izu ụka na ezumike.
Gbọ njem site na Sgbọ mmiri: Nnyefe n'ime ụbọchị 2-5 nke nnata nke ịkwụ ụgwọ, ewepu izu ụka na ezumike.
Ihe: katọn 40 kwa pallet (1 * 1 M)
Industlọ Ọrụ Dị Mma:Materiallọ ihe owuwu
Mgbe Akwụkwọ ikike Service:Video oru nkwado
Vidiyo na-apụ-nyocha:E nyere
Akuko Ule nke Ngwa:E nyere
Typedị ahịa:Ngwaahịa dị ọkụ 2019
Akwụkwọ ikike nke isi mmiri:Afọ 1
AHIR SEL N'LLỌ AKA P :R::Ike igwu ala
Igwe na-ekpuchi mmiri
Metzọ Ngwa:Nnukwu nrụgide
Ihe mkpuchi ụlọ
Polyurethane ụfụfụ ndochi Machine
Ọnọdụ Ọrụ Obodo:Canada, Germany, Viet Nam, Saudi Arabia, Russia, Malaysia, Australia, UAE
Ebe ngosi:Germany, Vietnam Nam, Saudi Arabia, Russia, South Korea, Malaysia
Ewetara Ọrụ Mbubata:Nkwado teknụzụ vidiyo, ụlọ ọrụ ọrụ ndị dị na mba ọzọ dị
.Dị Igwe na-ekpuchi mmiri
Aha Akara OEM
Njirimara Ọgwụ resin
Ojiji Ihe mkpuchi ụlọ
Ogwe ahụ siri ike na aka plastik nwere ike iburu ibu kachasị, na usoro ndị dị na aka nwere ike iwusi esemokwu ma hụ nchekwa ahụ.
Akwa Ike Drill
Jiri igwe eletrik BOSCH kacha mma na ahịa iji hụ na nkwụsi ike na arụmọrụ nke ngwaahịa niile.
Ọ nwere ike ihapu mmiri mmiri were were na elu nsogbu gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: injection grouting packers ígwè High Pressure Aluminium A10 Grout Injection Packer
Osote: Brass agba Ọgwụ Packers ígwè 13 * 150mm A15 grouting injection kpọkọta
Acrylate High Pressure grouting Pu epoxy Injec ...
Ọgwụ grouting packers ígwè High Pressure ...
Ewepụghị Head ọnụ ara M6 Ọgwụ Packers ígwè 13 * ...
Professional High Pressure Girma A15 ọgwụ ogwu ...
Golden coupler OEM hegzagon igwe anaghị agba nchara Grea ...
Ewepụghị Head ọnụ ara M8 Ọgwụ Packers ígwè 16 * ...